Izahlulo zemoto, I-Ford Ranger Iipompo zeoyile, iZinto ezothusayo ezithengiswayo-iNitoyo
Ukurhoxiswa komoya okuhambahamba
Ikhonkco levili lesithsaba
ngaphezu kwamazwe ali-180 kunye nemimandla
Abathengi abangaphezu kwama-400
Iindlela ezininzi zonxibelelwano zentlalo
Kwi-Intanethi nakwimiboniso yehlabathi yonyaka
Uluhlu olupheleleyo lwezinto ezizenzekelayo
Amalungu eqela lobungcali
Iminyaka engama-21 yamava kunye nobungcali
Inkonzo yasemva kokuthengisa kunye nengcebiso yokuthengisa enobulumko
USICHUAN NITOYO AUTO WOKUGCINA IPARTSCO. LTD
Inkampani yethu ngomnye wabathengisi abadumileyo beemoto, umenzi eSichuan, China. Sinikezela ngeendawo ezipheleleyo zeendawo zokugcina izinto ukusukela ngo-2000, yenza imali yakho ikhuseleke, kwaye uqiniseke.
Owona mhlaba wethu uphambili zizinto ezizenzekelayo / izixhobo zeemoto, i-Pick-up, iVan, ibhasi, umsebenzi onzima, ilori yokukhanya, ifolokhwe, njl. ukusuka eJapan, eKorea, eMelika, eYurophu ukuya kwisithuthi saseTshayina. Ezi mveliso zithunyelwa kwiLatin America, North America, South East Asia, South Asia, Middle East, Africa, East and South Europe, Russia, etc. We have professional and strong team, can supply you correct goods, and guaranteed quality with competitive ixabiso!
INitoyo liziko lakho lokuthenga elizimeleyo kuzo zonke iimfuno zamalungu akho ezithuthi! Masikhule kunye, uNITOYO – soze akuphoxe!
Ngo-2000, iqela lethu lokusekwa laqala ishishini lokuthumela ngaphandle kwezithuthi kunye nokutyelela okuninzi kunye nophando malunga nemveliso yonke yaseChina, kwaye yafumana iifektri ezifanelekileyo.
2000-2005 Ulwandiso Kuyo yonke iMarike yaseMzantsi Melika
Emva kwemizamo emininzi kunye notshintsho sikwazile ukuthembela kubathengi kwimakethi yoMzantsi Melika ngakumbi eParaguay.
Sineqela lokuthengisa elisemagqabini kwaye linoxanduva kakhulu ekuthengeni nasekulawuleni ngokufanelekileyo isebe, ukubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni kubathengi kwihlabathi liphela.
Umsebenzi weqela lethu lokuthengisa kunye nesebe lokuthenga lahlulwe yinkqubo yesithuthi, kwaye amalungu aphambili onke anamava eminyaka emi-3 ubuncinci ukuze ungakhathazeki ngokukhethekileyo kwenkonzo kunye neemveliso zethu.
Ngaphandle koko, amalungu esebe lethu lolawulo akhethwe ngokusebenza kwabo, kunye nokukhethekileyo ukuqinisekisa ukuba iimpahla ziziswa ngokukhuselekileyo kuwe ngexesha elifanelekileyo kunye namaxwebhu afunekayo anje ngeFOM-F, EGYP EMBASSY CERTIFICATE, COC eKenya njl.
Isebe lethu lenethiwekhi liza kugxila kuhlaziyo lwexesha lokwenyani lweemveliso zethu kunye nokunyuselwa kwethu, ke qiniseka ukuba sele usilandele kuFacebook nakwiLinkedIn.
Ngaphezulu kwayo yonke imisebenzi yethu igubungela yonke inkqubo yokufumana eqinisekisa ukusebenzisana ngokuphumelela.
I-NITOYO ibikumacandelo ezinto ezenzekileyo kushishino ukusukela ngo-2000, siqokelele izibonelelo ezityebileyo zeefektri kunye namava entengiso aphuhlisayo anokunceda abathengi ukuba bakhule bazinze kwaye bakhawuleze.
Izixhobo ezizenzekelayo / izixhobo / izixhobo / zeemoto / Khetha ~ phezulu / iVan / ibhasi / umsebenzi onzima / iTraki / ifolokhwe, njl.njl.
Ukuqinisekiswa kweNITOYO ngeempahla ezichanekileyo kunye nomgangatho oqinisekisiweyo.
Umtya ngamnye weemveliso unabasebenzi abaqeqeshiweyo ukuze baqinisekise ngeNkonzo eNgcono yophando kunye nomyalelo oza kuzalisekiswa. Ixabiso leNITOYO liyakhuphisana, aliyi kuba phezulu kuneefektri.
Imvelaphi evela SICHUAN KWAMANYE AMAZWE IQELA IQELA, imbali ende ukurhweba kumazwe angaphandle kunye noshishino olomeleleyo ukwenza ukhuseleko imali yakho.
I-NITOYO inoxanduva lwayo yonke i-odolo esiyifumeneyo, sicingisisa emva kokuthengisa inkonzo, asikaze sikuyeke!
Sithathe inxaxheba kwimiboniso emininzi yezinto ezizenzekelayo kwihlabathi liphela minyaka le, njengeLATIN EXPO, APPEX, LAS VEGAS, AUTOMECHANIKA DUBAI, CANTON FAIR, njl. iimveliso ezifanelekileyo kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Sisasaza bukhoma kumaqonga ezentlalo veki nganye ukubonisa iimveliso zethu zamva nje kunye nokunxibelelana nabathengi.
Ijeep Grand Cherokee
IVW Tiguan 2.0 T
Nitoyo Transmission Iintetho Power Thatha Off Phendla Ge ...
I-NITOYO Umgangatho oPhezulu wokuThunyelwa kweeNxalenye zeNdawo ...
INITOYO Umgangatho oPhezulu weeNjini zeNjini zeTurbocha ...
Nitoyo Car waqhekeza caliper esetyenziselwa uluhlu olupheleleyo ca ...
I-NITOYO Umgangatho oPhezulu woMgangatho wokuMiswa koMoya oMnyama ...
Indlu yokuGcina eyaneleyo yokuBonelela ngeNkonzo yokuNikezela ngokukhawuleza
Abathengi bethu phesheya
Ngaphezulu kweminyaka engama-21 uNitoyo ufumene uninzi lwezimvo ezilungileyo ezisisiseko kwiimveliso zethu kunye nenkonzo.
ISISHWANKATHELO SE-NITOYO SONYAKA-NONYAKA SE ...
Ngomhla wamashumi amabini anethoba, uJuni Nitoyo uxhase isishwankathelo sonyaka ophakathi kunye nokwabelana ngeseshoni. Abaphathi beemveliso abaninzi babelana ngamava abo malunga ...
INTO EMALUNGA NOKUQINISEKISA I-Rack
Unobangela womatshini wokuqhuba ingxolo engaqhelekanga: 1. Ikholamu yokuhamba ayithanjiswanga, ukungqubana kukhulu. 2. Jonga ioyile yamandla ombane ...
NITOYO KWI-AUTOMECHANIKA SHANGHAI
Nge-2 kaDisemba -5th, ngo-2020 uNITOYO wayese-AUTOMECHANIKA ngeesampulu ezahlukeneyo kwaye wadibana nabahlobo abaninzi bakudala kunye nabatsha. Abahlobo abaninzi beza umnquba yethu ...
I-NITOYO Kwi-128th Canton Fair
Nge-15 ka-Okthobha nge-24, ngo-2020, uNitoyo waya kwi-128th Canton Fair ngokusasaza ngqo kwi-Intanethi. Ngeli xesha sinezikhathi ezili-18 zomphunga ophilayo kunye no ...
Imibuzo malunga neemveliso zethu okanye u-pricelist, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba nenxibelelwano ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Kumgangatho we-8, Hayi 2, Tongfu Xiang, Xiyulong Street, Chengdu, Sichuan, PRChina 610015